स्कूल जान यतिसम्मको खतरा पार गर्नुपर्छ ! (हेर्नुहोस् फोटोफिचर) - inaruwaonline.com
स्कूल जान यतिसम्मको खतरा पार गर्नुपर्छ ! (हेर्नुहोस् फोटोफिचर)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २०, २०७३ समय: ४:४७:४२
बेइजिङ | चीनको दक्षिण-पश्चिममा रहेको एक हिमाली गाउँका विद्यार्थीहरुले विद्यालय जानका लागि यतिसम्मको जोमिख लिनुपर्छ कि आफ्नो ज्यानको समेत परवाह गर्नु हुँदैन । किनकी यस्तो नगरे शिक्षाको उज्यालोबाट बन्चित हुनुपर्ने हुन्छ ।
बिकसित राष्ट्र चीनको यो गाउँ यति दुर्गम छ कि यहाँका मानिसहरुको पहुँच कम छ । समाचार एजेन्सीहरुले ६ वर्षका बालकले सम्म जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर शिक्षा लिनुपर्ने बाध्यतालाई तलको तश्विरमा देखाएका छन् । २ हजार ६ सय २४ फिट अग्लो ठाउँमा रहेको स्कुल पुग्न उनीहरुले पहाड चढेर जानुपर्ने हुन्छ । मे १४ मा खिचिएका यि तस्विरहरु चीनको पिपुल्स डेली अनलाईनसँग आबद्ध हुवानक्विले सार्वजनिक गरेको हो ।
रिर्पोटमा जनाइएअनुसार १५ विद्यार्थीहरुले २ घण्टासम्म भर्यांग चढ्नमै समय खर्चिन्छिन् । चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित झाओजू काउन्टीका विद्यार्थीहरु यसरी नै भर्यांग चढेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्छन् । ६ देखी १५ वर्षबीचका विद्यार्थीहरु ठूला ब्यागहरु बोकेर विद्यालयको पोशाक माथि चढ्दैछन् र उनीहरुलाई तीनजना अभिभावकले नियालिरहेका छन् । उनीहरुको घर अतुल इयर गाउँमा छ र यो ४ हजार ६ सय फिट उचाईमा पर्छ
यस दुगर्म गाउँमा केवल ७२ जना परिवार बस्छन् । उनीहरुको आयआर्जनको बाटो खुर्सानी खेती हो । यहाँका बिद्यार्थीहरु एकपटक जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर विद्यालय पुगेपछि दुई सातासम्म विद्यालयमै बस्छन् । उनीहरुलाई पहाड चढाएर स्कुल लैजाने काम आलोपालो उनीहरुको अभिभावकहरुले गर्छन । बालबालिकाहरुलाई स्कुल लाने क्रममा उकालो चढ्न २ घण्टा समय लाग्छ । सानो बिद्यार्थीको सुरक्षाका लागि डोरी बाँधिन्छ ।
तर पनि यो खतरा मुक्त छैन अलिकति केहि सन्तुलन गुमेको खण्डमा ज्यान गुमाउनुपर्ने हुन्छ । यस क्षेत्रका सचिव जिटीका अनुसार गाउँबाट पहाड चढ्ने क्रममा अहिलेसम्म झन्डै ८ जनाको ज्यान गइसकेको छ । कहिलेकाँही पानी र हिउँका कारण यात्रा निकै जोमिखपूर्ण हुने गर्छ ।यस्तै जोखिमका कारण कतिपय अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई स्कुल नै पठाउँदैनन् । जिटीका अनुसार अन्य क्षेत्रको तुलनामा यो गाउँ अझै २ सय वर्ष पछाडी छ । तर यति धेरै समस्या भएतापनि खेतीयोग्य जमिन भएका कारण गाउँलेहरु धनी छन् । ७२ घरधुरी मात्रै भएको कारण यो गाउँमा सरकारले त्यति ध्यान दिंदैन ।
गाउँलेलाई उक्त गाउँबाट नजिकको शहरमा लैजादाँ बेरोजगार र जग्गा जमिन बिहिन हुन्छन | यदी सरकारले उक्त स्थानमा सडक बनाउने हो भने ६० मिलियन युआन खर्च लाग्छ । जुन जनसंख्याको आधारमा निकै ठूलो खर्च हो ।-साझासवालबाट